Shop Archives - Shop
Shop > All Articles > Community > Shop
Shop, Social Causes
SHOP APP x RAKUTEN VIBER, “Happy Shopper” Viber Sticker Launch Giveaway0701
The KaungHtet April 4, 2022 10:35 am April 19, 2022
ယခုလိုကာလမြိုးမှာ ခဈြခငျရသူတှနေဲ့ လလှေိုငျးပျေါတှငျအဆကျအသှယျမပွတျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ လူခငျြးမတှရေ့တဲ့ အှနျလိုငျးဆကျသှယျပွောဆိုမှုတိုငျးကို အသကျသှငျးနိုငျဖို့အတှကျ Emoji (သို့မဟုတျ) Sticker မြားကို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နံပါတျ (၁) ရှော့ပငျးအကျပလီကေးရှငျးဖွဈတဲ့ Shop App မှ …
Community, Lifestyle, Lifestyle, Others, Shop, Social Causes
Shop App ရဲ့ ဘယျ Social Media တှကေနေ ဘယျလိုပရိုမိုးရှငျး အကြိုးခံစားခှငျ့တှရေရှိနိုငျမလဲ?089
The KaungHtet March 22, 2022 11:22 am April 5, 2022
ကြှနျုပျတို့ရဲ့ မွနျမာ့နံပါတျ (၁) ရှော့ပငျးအကျပလီကေးရှငျး (Shop App MM) ရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာခယျြနယျမြားမှ မတူညီတဲ့ ပရိုမိုးရှငျးအကြိုးခံစားခှငျ့မြားကို နစေ့ဉျတငျဆကျပေးလကျြရှိပါတယျ။ Shop App ရဲ့ ဘယျ ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေ ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှေ တငျဆကျပေးလကျြရှိနတေယျဆိုတာ ကွညျ့ရှုလိုကျရအောငျ …
Community, Others, Shop
Improve Your Automotive Business Online0528
The KaungHtet May 19, 2020 10:59 am May 19, 2020
Online businesses are the future. And with the lockdown situation, this shift from offline to online has indeed accelerated. Sellers …
🚚Shop မှ ပစ်စညျးတှကေို မွနျမာနိုငျငံနရောအနှံ့အပွားသို့ ပွနျလညျပို့ဆောငျပေးနပေါပွီ🚚0565
The KaungHtet May 12, 2020 4:16 am May 12, 2020
ကိုရိုနားဗိုငျးရပျဈ( Covid 19 ) ရောဂါကွောငျ့ ဈေးဝယျသူမြားအန်တရာယျကငျးရှငျးစရေနျ အတှကျ ရနျကုနျ၊ မန်တလေး၊ပခွူး၊ မှနျ၊ နပွေညျတျော (ဥတ်တရသီရိ)၊ ကခငျြ၊ကရငျ၊ကယနျး အစရှိသော မွို့မြားသို့ နရောအနှံ့ ပို့ဆောငျပေးနသေညျ့အပွငျ စဈကိုငျး၊ ဧရာဝတီ၊ရှမျး ၊ …
Community, Others, Seller Stories, Shop
Your Complete Guide to BecomeaSeller on SHOP0540
The KaungHtet May 4, 2020 7:18 am May 12, 2020
Do you runasmall or medium enterprise business and want to make the most of it by earning more …
How Much Discounts Will We Get on This Year’s Mobile Week?0818
Ameer Hamza June 26, 2018 9:30 am June 26, 2018
High End Device Samsung Note FE ကို 43% off နဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့ Mobile Week Discount တွေအကြောင်း01101
Ameer Hamza June 26, 2018 9:30 am June 27, 2018
ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ အကြိုလုပ်တဲ့ Football Fever Week မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လျှော့ဈေးတွေရှိတယ်နော်…………..။0935
Ameer Hamza June 1, 2018 3:23 am June 8, 2018
ဒီနှစ်တော့ လေးနှစ်လုံးစောင့်ခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲ ကြီးကို ဥရောပအရှေ့ပိုင်းမှာ ကျင်းပတော့မယ်နော်။ ဘောလုံးပွဲ ကိုကြည့်ပုံကြည့်နည်းပဲကွဲသွားတာ တချို့က ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အသင်းကို အားပေးဖို့ ပြင်နေချိန်မှာ တချို့ကလဲ ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့သက်သက်ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာမျိုး။ လူငယ်တွေကလက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ လက်ဘက်ရည်တခွက်မှာပြီးစုကြပြီ။ ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ ဘောလုံးပရိသတ်ရဲ့ အော်သံဟစ်သံ …
Deals for Football Fever Week on Shop that we found the most interesting0546
Ameer Hamza June 1, 2018 3:23 am October 12, 2021
This year we will be watching World Cup 2018 Football game which will be held in Eastern Europe. Some pledge …
ဘယ် Laptop ဝယ်ရမလဲ အာရုံစားနေပါသလား။ ၄၀%ထိလျှော့ဈေးတွေနဲ့ Computing Week ရောက်လာပါပြီ။0580
The KaungHtet March 21, 2018 6:58 am May 3, 2018
စမတ်ဖုန်း နဲ့တက်ဘလက်တွေပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်း Laptop တွေကို အခုတလော လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကီးဘုတ်ကိုဒေါက်ဒေါက်နဲ့ရိုက်ပြီး ရုံးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်တာတွေ၊ အချက်အလက်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ အခုချိန်ထိ Laptop ကိုဘယ် Technologyပစ္စည်းကမှ အစားမထိုးနိုင်သေးပါဘူး။ Laptop တလုံးဝယ်တဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်အသုံးပြုမလဲ ပြီးတော့ဒီ Laptop …